Maitiro ekuona iyo yakazara vhezheni yewebhusaiti kubva kuSafari | IPhone nhau
Maitiro ekuona iyo izere vhezheni yewebhusaiti kubva Safari ine iOS 9
Isu tese takanzwa kushushikana pane dzimwe nguva kubva ku iPhone kana iPad patakasvika pawebhusaiti uye yakatiratidza iyo mobile vhezheni panzvimbo yeiyo yakazara desktop desktop. Kazhinji nharembozha inotibatsira kuchengetedza dhata redu re data kuti rirarame, asi pamwe hatigone kuwana zvirinani mabasa eiyo yakazara vhezheni yatinoda panguva iyoyo chaiyo, ndosaka tichikuunzira iyi dzidziso nezve maitiro ekuwana izere desktop desktop yewebhusaiti yatinoda kubva kuSafari yeIOS 9, kubvira nekuuya kweshanduro nyowani yeIOS ichi chave chimwe chezvinhu zvachinja, zvinyararire, tisingazvizive. Izvo zvakapusa, saka usazvipotsa.
Na iOS 8 isu tanga tatova nemukana wekuona iyo desktop desktop kubva kuSafari yeIOS, zvisinei, izvozvi Apple yasarudza kushandura iyi sarudzo yenzvimbo, izvo zvisingaite kuti zviome, asi zvakasiyana. Neichi chikonzero, vanhu vazhinji havazive nezvekuvapo kwayo. Kujekesa zvese zvirimo zvewebhu peji hakutore iwe anopfuura matatu masekondi, dzidza maitiro ekutenda kune aya matanho akapusa atichakuratidza pazasi.
1 Kurumidza Maitiro - Zvemukati Reload Bar
2 Inononoka nzira - Goverana basa
Kurumidza Maitiro - Zvemukati Reload Bar
Isu tinovhura Safari uye toenda kune webhusaiti yatinoda kushanyira, tichaona kuti vhezheni yesoftware yewebhu inotakura
Kana iyo webhusaiti yangozara zvizere, tinobatisisa bhatani rekuvandudza rewebhu webhusaiti iri mubhawa rekutsvaga kwemasekondi maviri, kudonha kunovhura nesarudzo "Desktop vhezheni".
Dzvanya pane iyo sarudzo uye ichavhura mune yakazara modhi.
Inononoka nzira - Goverana basa
Kana iyo webhusaiti yazara zvizere, tinya nezve chikamu cheSafari, iyo inoratidzwa pazasi iri pakati, pakati pe «kuverenga runyorwa» uye ne «kumberi» bhatani.
Menyu inodonhedza ichavhura neese ekugovana mabasa uye Safari yekuwedzera, pakati pemabasa ari mumutsara wechipiri isu tichawana «Desktop vhezheni».
Kamwe sarudzo iyi ikadzvanywa, iyo desktop vhezheni yewebhu peji inozotakura.
Zvinoshamisa zvakapusa, Kuisa desktop rewebhu peji harina kumbobvira rave nyore uye nekukurumidza sezvakaita neIOS 9, Iyi ndeimwe yenyaya idzo Apple inoramba yakanyarara nekuda kwechimwe chikonzero chatisingazive, asi kuti muActualidad iPad isu tinotarisira kugovana newe mese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuona iyo izere vhezheni yewebhusaiti kubva Safari ine iOS 9
Iko kutsva kutsva kunounzwa neIOS 9
Chizvarwa chechipiri chechipiri TouchID chinoonawo minwe yakatota